Moments leh saaxiibo 50
Ma waxaa haboon in nin ninku ku adkaado rabitaankiisa jinsiga, oo uu ku dadaalayaa inuu ku noolaado nolol kali ah?
Taasi waxay kuxirantahay ujeedada iyo nooca ninka. Marna ma habboona in la isku dayo in la burburiyo ama la dilo rabitaanka galmada; laakiin had iyo jeer waxaa ugu wanaagsan in la xakameeyo oo la xakameeyo. Haddii qofku aanu lahayn shay ama kafiican kan jinsi ahaan; haddii nin lagu xukumo dabeecadda xayawaanka; iyo haddii qofku u noolaado inuu helo oo uu raaxeysto, oo ka fikiro waxyaalaha raaxada galmada, Suura gal ma ahan inuu isku dayo inuu burburiyo ama dilo damacyadiisa galmo - in kasta oo uu "ku noolaan karo nolol gumaad."
Sida ku xusan “Qaamuuska Eraybixiyaha,” celis ahaanta waxaa loola jeedaa, “xaaladda qofka aan guursan ama guurka, gaar ahaan nin aan guursan; ka fogaanshaha guurka; sida, caribacy of wadaadnimadii. "Celibate ayaa la sheegay in," mid ka mid aan weli guursan; gaar ahaan, nin ku xidhan nolosha keligeed ah nidarrada diinta. ”
Qofka jir ahaan iyo maskax ahaanba uqalma inuu guursado, laakiin ku nool nolol guurdoon ah si uu uga baxsado xiriirka, mas'uuliyadaha iyo cawaaqibka guurka, oo aan lahayn rabitaan ama rabitaankiisa xakameynta dabeecadiisa galmada, badanaa waa karbaash. aadanaha, inuu yahay ama uusan xor ka ahayn nidarka, inuu leeyahay ama uusan qaadan amarro oo wuxuu ku jiraa hooyga iyo ilaalinta kaniisada. Daacadnimada iyo daahirsanaanta fikirka waxay muhiim u yihiin nolosha kali-talisnimada ee gala ruuxa noloshaas gala. Waxaa jira qolyo yar yar, kuwa aan guursan, ee aan ka liidan fikirka iyo falalka galmada marka loo eego kuwa guurka ku nool.
Dadka dareemaya guriga adduunka iyo kuwa jir ahaan, akhlaaq ahaan, maskax ahaan ku habboon inay guursadaan, badanaa waxay iska indhatiraan waajibaadka iyo waajibaadka shirkadeed iyagoo sii jooga. Sababta uu qofku ugu noolaanayo noloshiisa gaboodfalku ma aha: in laga dhaafo xidhiidhka, waajibaadka, xilalka, sharciga ama si kale; nidarraynta, qalin-qorista, amarada diinta; si loo helo mudnaan; si abaalmarin loo helo; si loo gaadho kor u qaadista awooda ku meel gaadhka ah ama tan ruuxi ahaaneed. Sababta loogu noolaado nolosha guurka waa inay ahaataa: in qofku aanu gudan karin waajibaadka isagu u gaarka ah ee uu isagu doonayo iyo inuu sameeyo, isla mar ahaantaana aamin u noqda waajibaadka ku xidhnaa waddanka guurka; taas macnaheedu waa in nolosha guurka ay ku habboon tahay waxa shaqadiisa ah. Tan micnaheedu maahan in xoogaa shaqo ah oo jaceyl ah ama fadaraal ah ay sabab u tahay in mid aan la qabin. Majirto shaqo ama xirfad shaqo oo dammaanad ka qaadasha ah. Guurku ma aha wax ka celinaya waxa inta badan loo yaqaanno "diinta" ama "ruuxiga" nolosha. Xafiisyada diimeed ee akhlaaqda ku wanaagsan waxaa buuxin kara lammaanaha sida kuwa aan guursan; iyo had iyo jeer badqabsi badan oo loo muujiyo qiraha iyo qirashada marka loo eego marka qirayaha aan la qabin. Qofka guursadaa ayaa inta badan karti u leh inuu bixiyo talo ka badan midka aan gelin gobolka guurka.
Celibacy waa lama huraan u ah qofka go'aansaday inuu gaaro dhiman la'aanta. Laakiin ujeeddadiisa in sidaa loo noolaado waa inay ahaato, in si wanaagsan uu ugu adeegi doono nooca bini aadamka ah. Qirashadu maaha meesha loogu talo galay qofka soo gala jidka loo maro nolol aan dhiman karin; oo markuu ku sii socdo jidka wuxuu heli doonaa shaqo ka sii muhiimsan. Qofka ku habboon inuu ku noolaado nolol khaniisnimadu ma hubin doono waxa waajibaadkiisu yahay. Qofka ku habboon in uu ku noolaado nolol aan caadi ahayn kuma xirna damac galmo; laakiin isagu iskuma dayo inuu burburiyo ama dilo. Wuxuu bartay sida loo xakameeyo oo loo xakameeyo, Tani waxay ku bartaa oo ku sameeyaa sirdoonka iyo rabitaanka. Mid ka mid ah waa inuu ku noolaadaa nolol caqli gal ah fikirka, ka hor inta uusan dhab ahaan awoodin. Kadibna wuu u nool yahay dadkoo dhan, isagoon dhaawac u geysan naftiisa ama dadka kale.